Soosaarayaasha & Alaab-qeybiyeyaasha Kabadhka Ku Xidhan | Shiinaha Pad Fardoolayda Transformer Qaybaha Warshad
35kV Saliid-lagu shubayo laba-meelood meel kala-furaha xamuulka
Saliid-ku-quusin afar-meelood meel kala-furid
12kV 630A Shidaal buuxi afar-meelood meel culeys ah ayaa loogu talagalay nooca giraanta nooca-sanduuqa isbeddelka giraanta ee loogu talagalay inuu la kulmo heerarka IEEE, IEC iyo GB ee dhammaan shuruudaha. Waxaa loo isticmaali karaa nidaamka dhulka ama dhulka hoostiisa. Saliida-lagu rusheeyey bedelka culeyska afar-meelood ee rakibidda, oo udhow xuddunta wax-beddelka ayaa yareyn karta isku-xirka gudaha ee Cable capacitance, sidaas awgeedna waxay si weyn u yareynaysaa wareegga ku-dhawaaqa ferromagnetic Labada dhinac ee sii kordhaya iyo kor u kaca labadaba waa la heli karaa Guud ahaan ...
Saliida-ku-quusin laba-meelood meel kala-furaha
Saliida-lagu shubayo laba-meelood meel kala-furaha ayaa badanaa loo isticmaalaa nooca isbeddelka sanduuqa Mareykanka, oo leh habka hawlgalka guga, waa beddelaad isku-xira saddex-waji ah si loo dhammaystiro hawsha jabinta iyo xiritaanka. By labada beddelaad load laba-booska sidoo kale ka koobnaan karaa nidaamka beddelaad-nooca beddelaad ee nidaamka qaybinta nooca giraanta, laba beddelaad xaalad gobolka: on, dami. Qiimeynta 10kV waxaa loo isticmaali karaa mashruucyada tamarta dabaysha iyadoo la adeegsanayo qalabka wax lagu beddelo. Ka hor intaadan isticmaalin tarjumaha wuxuu ubaahanyahay qalajin. M ...
Magne X joojiyaha waxaa loo isticmaalaa si taxane ah aaladaha dhowrista aasaasiga ah ee hadda jira sida Fuse Bay-o-net ama Magne X. Magne X joojiyaha qaybta waxtarka leh ee aadka u hufan wuxuu yareynayaa saameynta culeyska hadda jira ee culeyska saaran qalabka iyo nidaamka qeybinta. hase yeeshe qiimeynteeda kala goynta ugu badan ayaa nadiifin doonta tan ugu sareysa ...
SMRS Fuse silig
Fiilooyinka fiyuuska dareeraha ah ee dareeraha ah waxaa loo isticmaalaa shirarka fiyuusyada Bay O-net si looga ilaaliyo aaladda qaybinta foomka waxyeellada u geysanaya iyo in laga ilaaliyo nidaamyada wax qaybinta aaladda fashilantay. Silig fiyuus fiyuus dareeme ah ma aha oo kaliya cilladaha labaad, culeyska xad dhaafka ah iyo heerkulka dareeraha wax beddela. Waxay xaddidi doonaan kuleylka kuleylka muddada dheer ee ay keeneen culeysyo badan iyo jawiga heerkulka sareeya Qiimeynta Dulmarka: Danab Ugu Badnaan Heer Hal-Waji ah oo Hakinaya Qiimeynta Buurta Mount Mount (rms asymmetrical) ...
bay o fiyuuska haysta
Bay-o-net Assembly waa curiyaha kooban ee shidaalka-ka-beddelka, si loo ilaaliyo qalabka markii uu hadda socdo. Markii lagu rakibo fiilada fiyuuska ku jirta, Bay-o-net waxay bixin doontaa badbaado, difaac aad u hufan, sida ku xusan heerkulka saliidda ee hadda jira. Golaha Bay-o-net wuxuu ku habboon yahay silig fiyuus fiyuus dareemayaal ah, silig fiyuus fiyuus labalaab ah, silig fiyuus fiyuus ah, iyo ELSP oo hadda xaddidaya fiyuuska, iwm. Waxay ku habboon tahay nidaamka korantada sare ee korantada leh iyadoo la isweydaarsanayo hadda 50HZ, volta caadiga ah ...